Saturday, February 14, 2009 13
Posted by Anita at 9:54 PM :: Leaveacomment...13 comments Links to this post
रूखका हाँगामा नाचिरहेका
हरिया पहेँलिँदै गरेका पातहरू
जसमा प्रस्टसँग म
मेरो मृत्यु देखिरहेछु ।
जीवन्त बनेको मेरो प्राण
ओइलाएर फूलसँगै झर्छ ।
मेरो प्राण बगैँचामा नाचिरहेछ
तर पनि म अञ्जान बनिदिन्छु
अनि चिम्लिदिन्छु आँखा-
सूर्यलाई हत्केलाले छेकेजस्तै ।
जून हराएको बिहानमा
अनि सूर्य हराएको रातमा
म पनि हराउनेछु- मौन बतासमा ।
बैशाख २८, २०६५
Posted by Anita at 6:08 AM :: Leaveacomment...4 comments Links to this post
मानवीय सम्बन्धमा इन्धनको काम गर्ने आत्मिक प्रेमदेखि साहित्यप्रेमसम्मलाई एउटै बोली 'बाटो अझै छ बाँकी' गजलकिताबबाट पुष्टि गर्ने राधा र घनेन्द्रजस्तै जोडीले समाजमा नयाँ रङ थप्दैछन् । यो रङ सामाजिक शक्तिप्रदर्शनभन्दा बाहिरको रङ त हो नै, यही किरिङमिरिङ जेलिएको समाजलाई रचनात्मकताको छाप छोड्ने रङ पनि हो । छोराको विवाहमा आशीर्वाद दिन पूर्वी नेपालको इटहरीदेखि आउनुभएका घनेन्द्रका आमा-बुबा नै समारोहका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । सबैलाई सम्बोधन गर्दै उहाँहरूले संयुक्त रुपमा उक्त संयुक्त गजलसङ्ग्रहको विमोचन गर्नुभयो । गजल विधामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका रवि प्राञ्जल, देवी नेपाल जस्ता सर्जकले नव वर-वधुलाई आशीर्वाद र शुभ कामना दिँदै उनीहरूको सिर्जनात्मक कामको सराहना पनि गर्नुभयो । ती सिर्जनशील दुलहा-दुलहीलाई नयाँ शैलीको विवाहको लागि बधाईसहित सफल दाम्पत्य जीवनको लागि हाम्रो पनि मुरी मुरी शुभ कामना है !
Posted by Anita at 5:27 AM :: Leaveacomment...0 comments Links to this post
विधा/वर्ग: प्रचलन, सरोकार-सम्बन्ध
तर पनि तिम्रो यादले सताइहेछ
साउन, २०६५ - सानेपा ।
Posted by Anita at 5:14 AM :: Leaveacomment...2 comments Links to this post
हरेक वर्ष रुखमा पालुवा पलाउँछन्, तर हरेक वर्ष पातको प्रकृति फरक-फरक हुन्छन् । पात पनि पलाउँछन्, पहेंलि न्छन् र झरेर तिनको ठाउँमा अर्को पात फेरिन्छन् । एउटै बोटमा पलाएका पातहरूमा पनि अनेक भिन्नता पाइन्छन् । हामी त मानिस, विवेक अनि आफ्नो छुट्टै धारणा भएका, हामी सबैबीचमा एकरुपता आउन सक्छ भनेर कसरी भन्न सकिएला र ? पातमा भएका रेशाजस्तै हामीबीचमा विचारको भिन्नता छ । त्यसैले त भिन्न-भिन्न अस्तित्वको विविध सुरमा हामी बाँचिरहेका छौँ, नत्र बाँच्नुको अर्थ नै के ? सबैको जीवनमा एउटा लक्ष्य हुन्छ । तर जाने बाटो र पुग्ने ठाँउ फरक-फरक । नत्र लक्ष्य बनाउनुको अर्थ नै के ?
Posted by Anita at 4:55 AM :: Leaveacomment...0 comments Links to this post